ပိုးကောင်မဟုတ်တဲ့ ပိုးကောင် !!! - JAPO Japanese News
ဂါ 13 Oct 2020, 8:59 မနက်
အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် Bugလို့ခေါ်တဲ့ ပိုးကောင်၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ ပုစဉ်း စသဖြင့် အင်းဆက်ပိုးတွေကို ဂျပန်လို 虫 (Mushi) လို့ခေါ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် တကယ်တမ်းအဲဒီ 虫 (Mushi) ခန်းဂျီးက အရင်တုန်းက ပိုးကောင် ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။
ခန်းဂျီးအက္ခရာရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကိုကိုယ်စားပြုထားတာပါ။ဒါဘာလဲဆိုတာ သိပါသလား ? ဟုတ်ပါတယ်၊ မြွေပါ။
虫 (Mushi) ပိုးကောင် ဆိုတဲ့ ခန်းဂျီးက အရင်တုန်းက မြွေ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းက ပိုးကောင်ကို မတူကွဲပြားတဲ့ 蟲 Bug ဆိုတဲ့ ထပ်တူကျသော စာလုံးသုံးလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် အခုပြောမယ့်အကြောင်းက ဤကဲ့သို့သော ခန်းဂျီးရဲ့ မူလအစအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။မမြင်ရတဲ့ ပိုးကောင်ရဲ့ အကြောင်းပါ။
ဂျပန်မှာ မမြင်ရတဲ့ အင်းဆက်ပိုးများရှိတယ်လို့ ဟိုးအရင်ကတည်းက စဉ်းစားစေခဲ့ကြပါတယ်။သက်ရှိလား၊ ပစ္စည်းလားဆိုတာတော့ သေချာ မသိတဲ့ ထူးဆန်းထွေပြားတဲ့အရာ။ အဲဒီအရာက မကောင်းတာရော ကောင်းတာရော လုပ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် “えへん虫” (Ehenbushi) ။ခေတ်သစ်ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်မှာတော့ globus pharynges ဆိုတဲ့ ခက်ခဲတဲ့အမည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆေးပညာမှာ အထူးသဖြင့် ရောဂါကိုမမြင်ရပဲ လည်ချောင်းမှာ တစ်ခုခုမှားနေတာကို ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ အရာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီခေတ်သစ်ဆေးပညာမှာနာမည်ကောင်းရှိပေမယ့် အကြောင်းအရင်းကတော့မသိသေးပါဘူး။
အရင်တုန်းက ဂျပန်လူမျိုးများက အင်းဆက်ပိုးများက မကောင်းသောအရာများပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ပုံရတဲ့အတွက် ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ Ehen! Ehen! ကနေ Ehenbushi လို့ပြောကြတယ်တဲ့။
နောက်ထပ် Mushi တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက ” 疳の虫” (Kan no Mushi) ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေ ညသန်းခေါင်ယံမှာ ကျယ်လောင်စွာအော်ငိုတာ၊ တော်တော်နဲ့ ငိုတာကို မရပ်နိုင်ပဲ ဘာကို ဒေါသထွက်လို့ငိုတာလဲဆိုတာကို မသိဘူးဆိုတာမျိုးကို ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာကို ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာကို ” 疳の虫” (Kan no Mushi) ဆိုတဲ့အနေနဲ့ ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အလိုလိုပျောက်သွားတဲ့အရာဖြစ်ပြီး
အကယ်၍ ရောဂါလက္ခဏာက ပြင်းထန်နေလျှင်တော့ အင်းဆက်ပိုးမွှားများထိန်းသိမ်းခြင်းဓလေ့ကိုပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်က ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပုံပါပဲ။ အဲဒီလို ဓလေ့လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိခဲ့ရတယ်။ သေချာတာတော့ ကျွန်တော်လည်း မမှတ်မိပါဘူး။
ကလေးရဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ စာလုံးပေါင်းရေးပါ။ ပြီးရင် ၎င်းကိုဆားရေဖြင့်ဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါ ထူးဆန်းစွာပင် သင့်ကလေးရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်မှချည်မျှင်ကဲ့သို့သောအရာထွက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အဲဒါက ” 疳の虫” (Kan no Mushi)၎င်းကိုဆွဲထုတ်ခြင်းအာဖြင့် ပိုးကောင်ကို ချိတ်တံဆိပ်ခတ်စေလိမ့်မည်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒီချည်မျှင်နှင့်တူသောအရာသည် အထည်ရဲ့ ချည်မျှင်မျှသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီချိတ်ပိတ်တာကို လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် တိတ်ဆိတ်စွာအိပ်နိုင်တယ်လို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်
ဒါဟာအတုအယောင်ချည်းပဲတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။စကားမစပ်၊ ဒီလို့ ရောဂါကို ခေတ်သစ်ဆေးပညာအားဖြင့် ရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
အဲဒါကိုမမြင်ရလို့ ပြောလို့မရဘူးဆိုတာ ကတော့ . . .ပြတ်ပြတ်သားသားမပြောနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အမှန်မှာ “えへん虫” (Ehenbushi) နှင့် ” 疳の虫” (Kan no Mushi) နှစ်မျိုးလုံးသည် ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကိုခေတ်သစ်ဆေးပညာဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့မရပါဘူးတဲ့။